2 TIMỌTI 3 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2TI 3)
2 TIMỌTI 3
Ma mata nke a, Timoti, na nꞌoge ikpeazụ ahụ, ọ ga-esiri ụfọdụ ike ịbụ ndị nke Kraịst.
Ndị na-arara ibe ha nye nꞌaka ndị iro ha, ndị isi ike, ndị na-ahụ ihe ụtọ nke ụwa a nꞌanya, kama ịhụ Chineke nꞌanya.
Ha ga-abụ ndị na-aga chọọchị, ma ha agaghị ekwenye nꞌihe ọ bụla ha nụrụ. Wezuga onwe gị nꞌebe ndị dị otu a nọ.
Ụmụ nwanyị ndị a bụ ndị na-agbaso ozizi ọhụrụ nile, ma ha anaghị enwe ike aghọta eziokwu ahụ.
Ma ha agaghị aga nꞌihu na-eme ihe ndị a ruo mgbe ebighị ebi. Otu ụbọchị mmadụ nile ga-amata aghụghọ ha, dị ka ndị mmadụ si mata mmehie Jenas na Jambaras mgbe ọ pụtara ìhè.
Ị makwaara banyere nsogbu m nile na ahụhụ m nile, nꞌihi ikwusa ozi ọma ahụ. Ị maara nsogbu nile dakwasịrị m nꞌAntiọk, na nꞌime Aikoniọm, na Listira. Ma Onyenwe anyị dọpụtakwara m nꞌime ha nile.
Nꞌezie, ndị nile chọrọ ime ihe ga-atọ Kraịst Jisọs ụtọ, site nꞌibi ndụ ịsọpụrụ Chineke, ga-ahụ ahụhụ site nꞌaka ndị iro Kraịst.
Nꞌeziokwu, ndị ajọ omume nile na ndị ozizi ụgha nile ga-ajọ njọ karịa ka ha dị ugbu a. Ha ga-eduhiekwa ọtụtụ mmadụ, nꞌihi na ekwensu eduhiela ha.
Ọ bụ ụzọ Chineke họpụtara ime ka anyị bụrụ ndị a kwadobere nke ọma nꞌụzọ nile, na ndị e mere ka ha bụrụ ndị jikeere ịrụ ọrụ ọma nye onye ọ bụla.
2 TIMỌTI 3:4
2 TIMỌTI 3:5
2 TIMỌTI 3:7
2 TIMỌTI 3:9
2 TIMỌTI 3:11
2 TIMỌTI 3:12
2 TIMỌTI 3:13
2 TIMỌTI 3:17